Madaxweyne Qoor Qoor oo diiday dalab ka yimid dhinacyada Puntland & Jubbland - Awdinle Online
Home News Madaxweyne Qoor Qoor oo diiday dalab ka yimid dhinacyada Puntland & Jubbland
Madaxweyne Qoor Qoor oo diiday dalab ka yimid dhinacyada Puntland & Jubbland
Madaxweyne Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor ayaa gaashaanka u daruuray dalab kaga yimid dhinacyada Puntland iyo Jubbaland, kaas oo wax lagaga badalayo qodobada lagu heshiiyey.
Saraakiil ku dhow madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor ayaa sheegay inuu ka horyimid fulinta dalab ay soo jeediyeen madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland, kaas oo ku aadan doorashada Soomaaliya.
Ilo-wareedyo ayaa sheegay in wada-hadal khadka taleefonka ah oo ay yeesheen xubnaha beesha Caalamka iyo maamulada Puntland iyo Jubaland loogu ogolaaday labadaas maamul in wax laga badalo qodobada muranka ka taaganyahay ee doorashada Soomaaliya.
Maamulka Galmudug ayaa la sheegay in dhankooda diideen iyagoo sabab kaga dhigay in aysan macquul aheyn in markasta sida ay rabaan loo yeelo Axmed Madoobe iyo Saciid Deni la yeelo.
Previous articleMidowga Afrika oo si kulul uga hadlay dagaalkii Beled-Xaawo
Next articlePuntland oo masuuliyiin u xirtay sii daynta dad loo heystay Shabaabnimo